Semalt विशेषज्ञले Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजन हटाउनका लागि एक सुरक्षित मार्गनिर्देशन परिभाषित गर्दछ
Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजन एक भाइरस हो जसले कम्प्युटरलाई आक्रमण गर्दछ, आवश्यक फाइलहरू डाउनलोड गर्दछ र प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना नै स्थापना गर्दछ। भाइरसका विकासकर्ताहरूसँग एन्टिभाइरस कार्यक्रमहरूद्वारा पत्ता लगाउन बेवास्ता गर्ने सुविधाहरू बनाउन सक्ने क्षमता छ। त्यसकारण, कम्प्युटरबाट संक्रमण हटाउन, एक व्यक्ति यसलाई म्यानुअल रूपमा धेरै जसो केसहरूमा गर्नुपर्दछ।
यदि एन्टिभाइरसले यसको अस्तित्व पत्ता लगाउँदछ भने, प्रयोगकर्ताहरू हटाउने उपकरण खोज्न कष्ट दिन हुँदैन किनकि यो सम्भवतः काम गर्दैन। Semalt डिजिटल सेवाहरु को अग्रणी विज्ञ, जर्ज Forrest, प्रणाली मा अधिक क्षति रोक्न भाइरस को छिटो उन्मूलन को सल्लाह दिन्छ। तल उनले भाइरस कसरी हटाउने बारेमा जोडदार गाइड प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ धेरै स्थानहरू छन् जहाँ एकले रुटकिट.टीडीएसएस.भी २ ट्रोजन भाइरस ईन्टरनेटबाट संकुचित गरेको हुन सक्छ। सब भन्दा साधारण व्यक्तिहरू अज्ञात लि links्कहरू, ह्याक गरिएका वेबसाइटहरू, स्पाम ईमेल, वा असत्यापित तेस्रो-पार्टी प्रोग्रामहरूमा क्लिक गर्दै छन्। ह्याकरहरूले प्रयोगकर्ताका कम्प्युटरहरूमा ट्रोजनलाई खुवाउने कारण त्यहाँ समावेश भएका फाइलहरूलाई क्षति पुर्‍याउनु हो, र प्रक्रियामा त्यस्तो गर्दा संवेदनशील जानकारीको खोजी गर्नु। ह्याकर्सले Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजन, ह्याकर्सको कम्प्युटरको रिमोट कन्ट्रोल प्रयोग गर्दछ।
अपरेटिंग सिस्टमको पूर्वनिर्धारित प्रणाली परिवर्तन गर्ने क्षमताको साथ, एन्टिभाइरस प्रयोग गरेर भाइरस हटाउन असक्षम छ वा नियन्त्रण प्यानलबाट स्थापना रद्द गर्नुहोस्। भाइरसको अन्य प्रभावहरू धेरै पप अप विज्ञापनहरू छन् जुन कम्प्युटर ब्राउजरमा देखा पर्दछ, र धेरै पृष्ठ पुनर्निर्देशनहरू। कम्प्युटरले सामान्य भन्दा ढिलो चालू प्रकृयाहरू सुरू गर्दछ।
एक Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजनको नतीजा
भाइरस पीसी को प्रदर्शन धीमा गर्ने क्षमता छ। भाइरसको बढेको धम्की, प्राय जसो केसहरूमा पीसी दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ। यसले एन्टिभाइरसहरूले मात्र यसको उपस्थिति फेला पार्न सक्दछ, तर यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउँदैन। यस्तो सुविधा स्थापना भएको साथ, यो पीसीमा हानिकारक फाईलहरू जारी राख्ने सम्भावना छ। यसले प्रणाली सुरक्षा र रक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्न जारी राख्दछ। रिमोट सर्भरहरूसँग कुराकानी गर्ने क्षमताको साथ, यस्तो सम्भावना छ कि उनीहरूले पहिले नै संक्रमित पीसीमा अन्य मालवेयर स्थापना गर्न जारी राख्नेछन्। प्रक्रियामा, यसले पृष्ठभूमि संसाधनहरू लिन्छ यसैले यसको कारण ढिला प्रतिक्रिया हुन्छ। अन्तमा, यसले प्रयोगकर्ताको बारेमा सबै असुरक्षित निजी जानकारी संकलन गर्दछ।
कसरी प्रभावी रूप बाट Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजन हटाउने
भाइरसको बारेमा उचित ज्ञान बिना, Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजन धेरै खतरनाक हुन सक्छ। भाइरसको डरलाग्दो प्रकृतिको कारण, समस्याको कारणहरूमा डुबकी राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। जे होस्, मानिसहरूलाई एउटा कुरा थाहा पाउनुपर्दछ कि प्रतिक्रिया समय छिटो छ, कम्प्यूटर फाईल वा सूचना बचत गर्ने सम्भावना जति बढी छ। त्यहाँ तीन विधिहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताहरूले ट्रोजन पूर्ण रूपमा मेटाउन प्रयोग गर्न सक्दछन्।
विधि १ : SpyHunter प्रयोग गर्दै, भाइरस हटाउने टूलकिट, जुन डाउनलोड गर्न सकिन्छ अनलाईन
यसमा प्रोग्राम अनलाइन डाउनलोड गर्ने, कुनै त्रुटिहरूको लागि सम्पूर्ण कम्प्युटर स्क्यान गर्ने, स्क्यानि after पछि फेला परेको मालिसियस फाइलहरू छान्ने, र तिनीहरूलाई हटाउने समावेश थियो।
विधि २ : ट्रोजनको मैन्युअल हटाउने
१. विन्डोज In मा, यसलाई हटाउँदै सेफ मोडमा विन्डोज कुञ्जी + सी बटन क्लिक गरेर हुन्छ। त्यसपछि पावर क्लिक गर्नुहोस्, पावर बटन होल्ड गरेर पुनःस्टार्ट गर्नुहोस्। समस्या निवारण, उन्नत विकल्पहरू, स्टार्टअप सेटिंग छनौट गर्नुहोस् र पुन: सुरु गर्नुहोस्। एकचोटि यो रिबुट भयो भने, सुरक्षित मोड बुटिingलाई आरम्भ गर्न संख्या select चयन गर्नुहोस्।
विन्डोज With वा सो भन्दा अघि, सुरक्षित मोड खोल्नको लागि, एक रिबुट गर्नुपर्छ र F8 थिच्नुहोस्, जुन माथिको अभिव्यक्त भएको जस्तो मेनू फिर्ता हुनेछ।
२. "स्टार्ट" प्रोग्राम चलाउनुहोस् र खोजी कार्यक्रमहरू र फाइलहरूमा नेभिगेट गर्नुहोस् र त्यसपछि संक्रमित फाइलहरू मेटाउनुहोस्।
Also. साथै, रेजिस्ट्री सम्पादकमा, भाइरसको लागि सबै सम्बन्धित नयाँ प्रविष्टिहरू मेटाउनुहोस्।
The. ब्राउजरबाट भाइरस पनि हटाउनुहोस्।
विधि :: कार्यप्रणालीले Rootkit.TDSS.v2 ट्रोजन हटाउन पुनर्स्थापना गर्दछ
नियन्त्रण प्यानलमा उन्नत विकल्प अन्तर्गत, प्रणाली सुरक्षा ट्याब छनौट गर्नुहोस्, प्रणाली पुनर्स्थापना छनौट गर्नुहोस्। एक एक पुनर्स्थापना बिन्दु छनौट गर्नुपर्छ र त्यसपछि नजिक।
त्यसो गरिसकेपछि, उन्नत पीसी फिक्सर डाउनलोड गरेर पीसीलाई अनुकूलन गर्नुहोस् र रेजिस्ट्री त्रुटिहरू ठीक गर्न यसलाई चलाउनुहोस्।